Kpakọba Nkpuchi Nkpuchi | China Folding Face nkpuchi Manufacturers, Suppliers
FFP3 Mask 6-Layer Respirator, apịaji Nkpuchi nkpuchi nkpuchi nkpuchi 10 iberibe
Ihe nkpuchi uzuzu ffp3 anyị na ffp3 respirators na-egosipụta sistemụ nzacha 6 nwere ike ịkọwapụta ntụ / adịghị ọcha n'ikuku iji chebe ndị okenye. Ihe nzacha FFP3 a kwekọrọ na ọkọlọtọ European EN149: 2001 + A1: 2009. na ffp3 ịgbado ọkụ respirator nkpuchi nwere a contoured udi. Igwe iku ume na ihe nkwado na-eme ka ahụmịhe ahụ dị mma ma nwee ike belata okpomọkụ na mmiri na-akpata site na iji mkpuchi ogologo oge.
3m Face Mask Ffp3 3m 9332 Ffp3 Face Mask 3m Iko Nkpuchi
Ffp3 Mask N95 na Nwa Ahụ Nkpuchi N95 bụ nchekwa na ahụike 95% filtration arụmọrụ. Nwere ike ichebe gị pụọ na ájá, ikpochapu ụgbọ ala, pollen, wdg.
N 95mask Cup Shape Mask Na-enweghị Valve Disposable Ffp3 Respirator Dust Mask
Mkpuchi nwere ike ihu ihu FFP2 nkpuchi ihu na valvụ
n95 ffp2 nkpuchi ihu bụ ụlọ ọrụ na-eduga ngwa nchekwa iku ume yana ihe mkpuchi 5 nwere mkpuchi iji gbochie ụmụ irighiri mmiri, nje ndị na-emerụ ahụ dị ka nje virus na nje bacteria, mmetọ, pollen, uzuzu & ikuku ikuku na-abanye na ihu. Igwe iku ume ffp2 mkpuchi ihu na-arụ ọrụ nke ọma yana akụkọ nyocha na-egosi na ọ na -eza 95% nke ihe dị mkpa karịa 0.3 microns. Igwe nkpuchi nkpuchi nkpuchi ahụ bụ ihe eji eme ihe na 3D wee bia na ntanye imi ya na akwa ya dị nro na-eme ka ọ dị mma.
Disposable Earloop Foldable na iku ume FFP2 Ihu nkpuchi
ffp2 nkpuchi oji 5-oyi akwa nchedo, irè karịa ot 3-oyi akwa disposable masks. FFP2 dusk masks na ffp2 ọgwụ maka nchekwa site na uzuzu, pollen na ihe ndị ọzọ siri ike. A na-eji akwa ffp2 ojii dị n'ime nke nkpuchi ahụ mee ihe na-adịghị emerụ ahụ na akpụkpọ ahụ. Nwere ike iji ffp2 ihu nkpuchi n'ọfịs, ụgbọ ala, ụzọ ụgbọ oloko, ụgbọ njem ọha. Okwesiri ndi mmadu na aru oru na ebe ndi mmadu juru ma obu ndi choro inweta ezigbo ume iku ume iji ya.